चिकित्सा द्वारा देखाइएको बारेमा चालीस पाँच हजार रूस पेट क्यान्सर हत्या मा सालाना बसोबास। यो रोग oncological प्रकृति को संरचना मा दोश्रो सबै भन्दा फैलाउन र घातक रोग हो। लगभग मानिसहरू भन्दा महिला ग्रस्त संभावना रूपमा आधा। यस मामला मा, क्यान्सर विकास को जोखिम उमेर संग बढ्छ।
पेट क्यान्सर। कारण
ट्यूमर को विकास पैदा मुख्य कारक समावेश:
; रक्सीको प्रयोग -
- अनुचित र अनियमित भोजन;
- गंभीर दुरुपयोग र अत्यधिक तातो खाना;
नियम, त्यहाँ गैस्ट्रिक mucosa रोग परिवर्तन गर्न subjected (क्षेत्रमा polyps, अल्सर, erosions मा, scarring) को एक क्यान्सर छ।
रोग को वर्गीकरण अनुसार साइटको स्थानीयकरण संग बाहिर छ। त्यसैले, पेट क्यान्सर, आफ्नो antrum वा cardia को शरीर निर्धारण। रोग विभिन्न आकारहरू हुन सक्छ। सबै भन्दा साधारण polypoid, च्याउ, uzlovidnuyu, तश्तरी, विस्तृत, ulcerative infiltrating ट्यूमर समावेश गर्नुहोस्। को प्रकार को squamous सेल संरचना बीच भेद अनुसार कार्सिनोमा, adenocarcinoma , र थप।
लक्षण पेट क्यान्सर केही समय नहुन सक्छ। तर, त्यसपछि रोग प्रगति गर्न थाल्छ। गम्भीर लक्षण को अभाव मा पहिलो सानो अवलोकन गर्न सकिन्छ क्यान्सर को लक्षण पेट को। तिनीहरूले सामान्यतया वजन, बेचैनी को भावना हुन्छ, रक्तअल्पता, अवसाद मा व्यक्त गर्दै छन्, केही अवस्थामा ल्याइने, खाना गर्न अनिच्छा, प्रदर्शन, निद्रामा बाधा, भोक घट्यो। पेट क्यान्सर यी गैर-विशेष लक्षण दिएको प्रारम्भिक चरणमा रोग पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ।
ट्यूमर को विकास संग देखा पर्नेछन् र दुखाइ को खुलारूपमा को epigastric क्षेत्र। शरीर को लुमेन साँघुरो मा पेट क्यान्सर को लक्षण खाना, belching, वाकवाकी, retching को सानो अंश को तीव्र संतृप्ति गर्न देखिन्छन्।
कालो मल - ट्यूमर वृद्धि अक्सर streaked प्रकट रगत वा "कफी आधार", र melena उल्टी, रक्तस्राव को जटिलताहरू सँगसँगै छ।
लक्षण को गम्भीरता को lesion को स्थान मा निर्भर गर्दछ।
आफ्नो विभाग मा हृदय गैस्ट्रिक क्यान्सर को लक्षण dysphagia (कठिनाई निगलने), छाती दुखाइ, लालास्रवण विशेषता। शरीर शरीर ट्यूमर, सामान्यतया asymptomatic। रोग को उपस्थिति क्यान्सर नशा एक गैर-विशेष संकेत संकेत हुन सक्छ।
हार antral (आउटलेट) कार्ड intestines मा खाना को निकासी समयमा disturbances अलग छ। विशिष्ट धारिलो निर्जलीकरण र प्रोभोकिंग लगातार उल्टी छ थकान।
रोग को निदान लागि आधार रोगी को एक सामान्य परीक्षा मानिन्छ। एक बल को रूप मा फिक्का र मृदु छाला, थकान, पेट द्वारा विशेषता विरामीहरु लागि। palpation मा अक्सर palpable ट्यूमर छ।
सही क्यान्सर को उपस्थिति पहिचान प्रयोग बारियम विपरीत निलम्बन पेट को एक्स-रे। साथै, यो सर्वेक्षण उल्लंघन निकासी अंग कार्यहरु को विश्लेषण को उद्देश्य परिणाम प्रदान गर्दछ।
क्यान्सर को दृश्य पत्ता लगाउने लागि fibrogastroduodenoscopy प्रयोग गरिन्छ। यो अध्ययन पनि बायोप्सी ट्यूमर को आकार र आकार मूल्याङ्कन गर्न अनुमति दिन्छ।
जब कम्प्युटर टोमोग्राफी प्रयोग मात्र क्षति को डिग्री प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ, तर पनि वरपरका अंगहरु र ऊतक को एक प्रक्रिया समावेश।
अल्ट्रासाउंड परीक्षा जिगर र अग्न्याशय मा metastases निदान गर्न।
को लागि एक उपचार रूपमा क्यान्सर ट्यूमर सर्जरी - मात्र कट्टरपंथी विधि लागू गरिएको छ।
के पेट्रो गुफाको लागि Peritonitis खतरनाक छ?
लोक उपचारका साथ पेन्सिटाइटिसको उपचार
HCG - ट्रान्सक्रिप्ट विश्लेषण र यसको सुविधाहरू
मोर्स "आश्चर्य बेरी": निर्माता, संरचना, समीक्षा
क्रूजर एडमिरल हिपर (1937-19 45): सृजना र सेवाको इतिहास। जर्मनीको नौसेना
पनरोक मोजा के हुन्?
होटल "Fatima" (कजान): तस्बिर समीक्षा
म प्रशासक पासवर्ड कसरी थाहा छ?